Mialà amin'ny fomba Sephardic | Bezzia
Hake fomba Sephardic
Sakafo Sephardika ampahan'ny kolontsaina mahandro sakafo antsika io. Avy amin'io sakafo nolovaina tamin'ny jiosy Sephardic io, ny jiosy izay voaroaka avy tany amin'ny saikinosy Iberia na noterena hivadika katolika tamin'ny andron'ny mpanjaka katolika dia tonga lovia malaza toy ny adafine na flakes ary ny hafa misy fitaomana toa an'io Sephardic io -fandraisana fomba.
La hake fomba Sephardic Vonona amin'ny fampiasana akora fototra toy ny tongolo, sakay sy voatabia ho an'ny fotony izy io. Miaraka amin'ireo dia misongadina ny hafa toy ny tery, izay manamafy sy mampitombo ny tsirony. Izahay dia nampiasa vola malina, fa afaka mampiasa roa hafa ianao raha maniry tsiro mahery kokoa.
Ny fomba tsara indrindra hanomanana ity lovia ity dia ny fampiasana hake vaovao fa tsara kosa ny mahita azy ireo isan'andro. valahana mangatsiaka izay hitantsika ao amin'ny supermarket akaiky ny trano. Ary ity fomba fahandro ity dia safidy tsara indrindra amin'ny fankalazana rehetra, nefa koa safidy tsara hanatanterahana ny menio isan'andro.
Feno fonosana 4
Hazo dipoavatra maitso voaendaka 200g
Volkano 5 amin'ny menaka
200 g. saosy voatabia na voatabia voatoto
Divay fotsy 1/2 vera
Persily vaovao voatetika
Afanaina hatramin'ny 160ºC ny lafaoro.
Afana ao anaty vilany ny menaka mitete sy ny hafanana antonony sosy ny tongolo mandra-pahalemy.
Avy eo, ampio ny tongolo lay ary mahandro amin'ny hafanana antonony iray minitra mampihetsi-po tsy tapaka.
Arotsaho izao ny anchovies, ny dipoavatra, ny zava-manitra, ny saosy voatabia, ny divay, ny sira ary ny dipoavatra, afangaroy ary mahandro 5 minitra hafa. Minitra vitsy hafa raha mampiasa voatabia voatoto ianao ary be rano. Amin'izay dia mahandro mandra-pahatongan'ny matevina kely.
Vantany vao vonona ny voatabia, apetraho ao anaty casserole ireo fonosana hake, sarony amin'ny foil aluminium ary ento any amin'ny lafaoro.
Mofomamy mandritra ny 5 minitra amin'ny 160ºC. Avy eo, vonoy ny lafaoro ary esory ny kaserôla avelao hipetraka ao anaty lafaoro mandritra ny minitra vitsivitsy izy.
Aroso mafana ny style Sephardic hake.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Pescado » Hake fomba Sephardic